Nhau - Yakagadzirirwa sevhisi, yehunyanzvi uye yakapfuma ruzivo
Munguva pfupi yapfuura, Wuxi Innovate Machinery Development Co, Ltd. Yapedza kugadzirwa kweiyo gel uye emulsion yekugadzira mitsara yeYangzhou Runlian Medical Equipment Co, Ltd. uye iyo kirimu uye mitsara yekugadzira lotion yeHunan Zhongxinkang Medical Equipment Co, Ltd. Zvese prodction tambo ese akagadziriswa. Yakapihwa zviri pamutemo kumutengi muna Gumiguru, uye mushandisi akaiswa zviri pamutemo mukugadzirwa.
Izvo zvakajairika maficha ezvikamu zviviri izvi hukuru hukuru, dzakasiyana uye diki nzvimbo. Zvinoenderana nemamiriro emushandisi, mainjiniya edu akagadzira chirongwa chakazara kubva mukutarisa kwese kwemabasa, mutengo, dhizaini, mashandiro, kutakura, uye kupinda. Iyo yese mashandiro maitiro ari nyore uye akatsetseka, uye zvakasiyana zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa mune yedu yakawanda-inoshanda emulsifier kuburitsa yemhando yepamusoro yakapera zvigadzirwa, izvo zvinogadzirisa vatengi 'matambudziko uye zvinonyatso kusangana nevatengi' zvido. Vashandisi vazere nekurumbidza kukambani yedu.
Uye Gore rino, nekuda kwedenda, kudiwa mumisika yekunze kwadzikira, asi isu tichiri kupihwa mirairo kubva kune vatengi apo denda iri rakanga rakaipisisa. Mutemo weBangladesh wakapedzwa musi wa 8 Gumiguru. Uyu mutengi muBangladesh anogadzira dhayi bvudzi. Mushure mekutsvaira, mweya weokisijeni muhari unoda kuyerwa. Nitrogen inoda kuzadzwa panguva yekugadzirwa. Nitrogen yekuchenesa michina inodiwa. Mainjiniya edu anogadzira muchina zvinoenderana nemutengi's inoda uye kubvisa kudikanwa kweiyo nitrogen yekuchenesa michina. Isuwo tinovapa yakadzama yekuisa mavhidhiyo uye tekinoroji rutsigiro. Vatengi vanogutsikana nemichina yedu nemasevhisi uye vasvika pakubatana kwenguva refu.
Wuxi Innovate Machinery Development Co, Ltd. yanga ichitarisa kune zvigadzirwa zveindasitiri kweanopfuura makore gumi. Yakaunganidza ruzivo rwakapfuma mukugadzirwa kwekirimu, mafuta ekuzora, uye michina yekuzora. Iyo tekinoroji yakakura uye yakazara. Dhizaini yega yega inogona kugadzirirwa vashandisi. Vatengi vanopa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa pavanogadzira anoshanda ekugadzira mitsara mhinduro kune vatengi kuchengetedza mari uye kugadzirisa kugona.